Soo -booqdeyaasha Kuuriya waxay jecel yihiin Guam iyo GVB waxay ku soo dhoweynayaan rakaabka T'way hees
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Guam » Soo -booqdeyaasha Kuuriya waxay jecel yihiin Guam iyo GVB waxay ku soo dhaweynayaan rakaabka T'way hees
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Guam • News • Dib-u-dhiska • Wararka Kuuriyada Koonfureed • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Soo -booqdeyaasha Kuuriya waxay jecel yihiin Guam iyo GVB waxay ku soo dhaweynayaan rakaabka T'way hees
Guam wuxuu soo dhaweynayaa booqdayaasha Kuuriya - marka hore COVID -19 kadib
Xafiiska Booqashooyinka Guam (GVB) iyo AB Won Pat International Airport Authority (GIAA) ayaa soo dhoweeyay duulimaadkii ugu horreeyay ee ka yimaada Seoul, South Korea sanadka 2021 goor dambe oo Sabtidii ah.
Diyaaradda oo nooceedu ahaa B737-800 ayaa ka timid magaalada Seoul ee Kuuriya, waxayna keentay 52 rakaab ah jasiiradda.
Duulimaadka waxaa maamula Waa taye, diyaaraddii ugu horreysay ee duulimaad oo dib u bilawda adeegga hawada caadiga ah toddobaadkiiba mar oo bilaabatay 31 -kii Luulyo.
Hoggaamiyeyaasha dalxiiska ee ka socda Xafiiska Booqdaha Guam oo ay weheliyaan heesaa maxalliga ah oo dhoolla caddaynaya iyo gitaarkiisa ayaa soo dhoweeyay dalxiisayaasha ku imanaya duulimaadka T'way ee Seoul kuna sii jeeda Guam Sabtidii.
Guam waa dhul jasiirad Mareykan ah oo ku yaal Micronesia, Galbeedka Baasifigga. Waxaa lagu kala gartaa xeebaha kulaylaha, tuulooyinka Chamorro, iyo tiirarkii dhagaxa ee hore. Muhiimadda WWII ee Guam waxay ku jirtaa muuqaalka Dagaalkii Beerta Taariikhda Qaranka ee Baasifigga, oo goobihiisa ay ka mid yihiin Asan Beach, oo ah goob dagaal oo hore. Dhaxalka gumeysiga Isbaanishka ee jasiiradda ayaa ka muuqda Fort Nuestra Señora de la Soledad, oo ku taal Umatac.
T'way Air Co., Ltd., oo hore u ahayd Hansung Airlines, waa diyaarad jaban oo Kuuriyada Koonfureed ah oo fadhigeedu yahay Seongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul. Sannadka 2018, waa markabkii saddexaad ee ugu weynaa Kuuriya oo qiimo jaban ku leh suuqyada caalamiga ah, wuxuu qaaday 2.9 milyan oo rakaab gudaha ah iyo 4.2 milyan oo rakaab caalami ah.
Shirkado diyaaradeed oo dheeraad ah ayaa ballanqaaday inay toos u duuli doonaan Kuuriya ilaa Guam illaa bisha Ogosto. Korean Air ayaa markaa kadib dib u bilaabi doonta adeeggii hawada toddobaadka soo socda 6 -da Ogosto iyada oo adeegsanaysa adeeg hawada toddobaadle ah. Jin Air ayaa sidoo kale bilaabi doonta duulimaadyo laba-toddobaadle ah laga bilaabo 3-da Agoosto iyo 6-da Ogosto.
“Waan ku faraxsanahay in gaadiidleyda Kuuriya ay dib u bilaabayaan adeegii Guam. Ballan -qaadkoodu waa tallaabo kale oo hore loogu qaaday soo -kabashada warshadaha dalxiiska ee Guam iyo fursad lagu muujiyo ruuxeenna Håfa Adai, ”ayuu yiri Madaxweynaha GVB & Maamulaha Carl TC Gutierrez. "Waxaan sii wadnaa inaan si adag ula shaqeyno ganacsigeenna safarka iyo la -hawlgalayaasha dalxiiska si aan u soo bandhigno dhaqankayaga CHamoru oo aan sare u qaadno waayo -aragnimada Guam ee Goob -joogga."
Jadwalka Duulimaadyada Kuuriya ee Bisha Ogosto:
Airline imaanshaha Time Awoodda Diyaaradda/Kursiga Duulista No. Frequency
waaye Luulyo 31, 2021 (duulimaadkii ugu horreeyay)
Ogosto 7, 14, 21, 28, 2021 11: 40 PM B737-800/189 kursi TW301 1x toddobaadle ah
Korean Air Ogosto 6, 13, 20, 27, 2021 1: 00 AM B777-300ER/ 277 kursi KE111 1x toddobaadle ah
Jin Cirka Ogosto 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 2021 2: 45 PM B737-800/189 kursi LJ641LJ771 2x toddobaadle ah
The Xafiiska booqdayaasha Guam (GVB) waxay kaloo qorsheysay adeeg salaanta imaanshaha si loo soo dhaweeyo duulimaadyada dib u bilaabanaya bisha oo dhan. Duulimaadyada la isku daray ayaa la filayaa inay Guam siiyaan qiyaastii 3,754 kursi ilaa dhammaadka Ogosto. In ka badan 600 oo kursi ayaa la iibiyay ilaa hadda.
Guam wuxuu si tartiib tartiib ah isku dayayaa inuu soo laabto si ay u noqoto Meesha Dalxiiska Ameerika ee Badweynta Baasifigga.
Duulimaadyada Geneva ilaa New York ee SWISS iyo United...